News | Tag: water
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धीअनुसार भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकालाई सिँचाइका लागि दिनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी दिन भारतीय पक्षले आलटाल गर्दै आएको छ । सन्धीअनुसार बनबासा पुलनजिकको शारदा नहरबाट भारतले ३५० क्युसेक पानी महाकाली नगरपालिका (साविक दोधारा चादँनी)लाई दिनुपर्ने भएपनि सम्झौताको २४ वर्ष बितिसक्दा भारतले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
एक बोतल पानीको मूल्य एक करोड !
एजेन्सी । एक बोतल पानीको मूल्य एक करोड पर्छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यसलाई मुर्ख भन्नु सिवाय केही विकल्प नरहला ।
घरघरमा खानेपानी धारा अभियान
काठमाडौँ । कालीकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले घरघरमा खानेपानीको धारा बनाउने अभियान शुरु गरेको छ । नगरपालिकाभित्रका तीन हजार ३०० घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पु¥याउन अभियान शुरु भएको हो ।
उभिएर हैन सँधै बसेर पानी पिउने गर्नुपर्छ
बिहानै उठेर पानी पिउनेहरुमा कब्जियतका समस्या हुँदैन
बिहान उठ्ने वित्तिकै पानी पिउनुहोस्
स्वस्थ रहन पानी कसरी र कतिबेला पिउने ?
एजेन्सी । पानी कति पिउन पर्छ त्यो व्यक्तिमा निर्भर रहने गर्दछ । तापनि एक स्वस्थ मृगौला भएको व्यक्तिले दिनभरमा दुई देखि साढे दुई लिटर पानी पिउनुपर्छ । पानीलाई अनुकुल मिलाई पिउन सकेमा यसले थुप्रै रोग लाग्न दिँदैन ।
अझै फोहर पानी खानपर्ने बाध्यता